အချစ်နှင့်ရသ Archives - Latest Myanmar News
လူချင်းတူပေမဲ့ ဘဝချင်းကခြားတယ် .. အခြေအနေချင်းမတူတာကြောင့်် အရည်အချင်းရှိဖို့ကြိုးစားရင်း တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေမိသားစုတာဝန်တာဆောင်ရအုံးမယ်. အဆင်မပြေတဲ့ ဘဝထဲ ကြုံလာဆုံလာတဲ့ အခက်ခဲတွေကြား သားရုန်းထွက်မယ်အမေ .ဆွေမျိူးအသိုင်းဝိုင်းတွေကြားထဲ အမေမျက်နှာမငယ်ရအောင် သားကြိုးစားမယ် . အမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားချင်တယ် .ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန် သူများတွေကျောင်းတတ်နေချိန် စီးပွားရေးအခြေနေကြောင့် ကျောင်း ပညာမသင်ခဲ့ရတော့ပေမဲ့ လက်တွေ့ဘဝပညာသင်ယူရင်း မိသားစု စရိတ်သားထောက်ပံ့မယ်အမေ.. အမေ့အသက်လဲ […]
ချစ်စွဲလည်းမစွဲ နဲ့… မုန်းစွဲလည်း မစွဲနဲ့
အမုန်းစွဲ အချစ်စွဲ တခါတလေ မုန်းစိတ်ဝင်နေတဲ့အခါ အဲဒီမုန်းစိတ်ဟာ မုန်းစွဲအဖြစ် စွဲနေတတ်သလို တခါတလေ ချစ်စိတ်ဝင်နေတဲ့အခါ အဲဒီချစ်စိတ်ဟာ ချစ်စွဲအဖြစ် စွဲနေတတ်ပါတယ်။ အမုန်းစွဲကြောင့်စွဲလန်းတဲ့သူကို ဒေါသတွေပွားရတတ်သလို ဒုက္ခတွေလည်းများရတတ်ပါတယ်။ အချစ်စွဲကြောင့် စွဲလန်းတဲ့သူကို လောဘတွေပွားရတတ်သလို သောကတွေလည်းများရတတ်ပါတယ်။ အမုန်းတွေစွဲရင် အပြုံးတွေဟာ ဝေးနေရတတ်သလို အချစ်တွေစွဲရင် နှလုံးတွေလည်း မအေးမြနိုင်ဘူးလေ။ […]
မိမိရဲ့ စိတ်ရင်းနှင့် ခံစားချက်ကို နားလည်သူဆီမှာသာ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မြုပ်နှံပါ
မင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်တဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မြုပ်နှံထားပါ… မင်းကိုိ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် အမူအကျင့်လေးတွေကို လုပ်ပြပါ… မင်းကိုိ နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ဖော်ပြပါ… မင်းကိုိ ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေကို ရင်ဖွင့်ပါ… မင်းကိုိ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပေးတဲ့သူဆီမှာပဲ မင်းရဲ့ […]
ဖေဖေါ်ဝါရီလ၂၉ ရက်နေ့မှာ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ယောက်ျားလေးကို အမျိုးသမီးတွေချစ်ခွင့်ပန်နိုင်
မိန်းမသားတိုိ့ ရက်ထပ်နှစ်မှာ ချစ်ခွင့်ပန်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ဒီနှစ် ၂၀၂၀ ဟာ (Leap Year) ရက်ထပ်နှစ် ဖြစ်တာမို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ မှာ ၂၉ ရက် ရှိတယ်။ အဲဒီ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၉ ရက်နေ့ မှာ မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ နှစ်သက် သဘောကျတဲ့ […]
နောင်တလို့ မတွေးပဲ စိတ်အသစ် ဖြင့်သာနေပါ
စိတ်အသစ်နဲ့နေပါ နောင်တတွေနဲ့မနေပါနဲ့ ပြီးခဲ့တာတွေ…..ပြီးသွားပါပြီ…။ ဒီနေ့ဟာ အသစ်ပဲ အသစ်က… ပြန်စပါ။ ဒီနေ့ကို …စိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ..စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေပါ…။ ဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်ရင် မနေ့က စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြီးခဲ့တာတွေက ပြီးပြီလို့ သဘောထားပါ…။ နေ့သစ်ကို… စိတ်သစ်နဲ့နေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါ…။ လူတစ်ယောက်ကို `မုန်း´မိတာ သူ့ကို` ရှုံး´ သွားတာနဲ့အတူတူပဲ…။ သူတို့ထက် […]
ချစ်သူများနေ့ အကြောင်း ရောမပြည်က အချစ်အကြောင်းကတော့ ချစ်သူများနေ့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ သမိုင်းအစပါ။ ရောမမြို့ ဘုရင်တစ်ပါး လက်ထက်မှာ စစ်တိုက်ထွက်ကြတဲ့ စစ်သည်တော်တွေဟာ ချစ်သူရည်းစား ဇနီးမယားတွေကို တမ်းတအမှတ်ရမှူများကြောင့် စစ်ပွဲတိုင်းအမြဲရူံးနှိမ့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဘုရင်ကြီးသိတော့ ရောမမြို့မှာ ချစ်သူရည်းစား မဖြစ်စေရ အစဉ်အလာအားဖြင့် လက်ထက်ထ်ိမ်းမြားခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်ပေးကြသော […]
February 3, 2020 Latest Myanmar News 0
ညီမလေး အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်… (1) စာတတ်တဲ့ယောက်ျားထက် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ တစ်မိုးအောက်ထဲ အတူနေထိုင်မဲ့သူဆိုတာ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို စာနာစိတ်နဲ့ကြည့်မြင်တတ်သူ ဖြစ်နေဖို့သိပ်လိုအပ်တယ် ။ (2) ပညာတတ်သူထက် ကြင်နာစိတ်ရှိသူကိုသာရွေးချယ်ပါ ။ ကိုယ့်ဘဝတစ်သက်တာလုံး အနီးဆုံးမှာရှိနေမဲ့သူဟာ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဖေးမနိုင်သူဖြစ်ဖို့ သိပ်လိုအပ်ပါတယ် ။ (3) […]
မကွဲခင်က ခွဲနှင့်ပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းသတိပေးရမယ့်အချက် ၅ ချက်ရှိသတဲ့ဗျ။ အမြဲနှလုံးသွင်းရမယ့်တရား ၅ မျိုးလို့ ခေါ်တယ်။ ငါ အိုရဦးမယ်။ ဒါလဲအမြဲသတိပေးရမှာ.. ငါအိုရဦးမယ်။ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဒို့ က သူများအိုတာသာသိတာကွဲ့ ။ ကိုိယ်အိုတာကို မေ့နေတယ်။ မေ့တတ်လွန်းလို့ သတိပေးရတယ်။ ငါအိုရဦးမယ်..။ ဒါပြီးတော့ နောက်ထပ်ဆင်ခြင်ရမှာကအင်း.. […]
ချစ်သူနှင့်အဆင်မပြေလျှင် သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ်မရလျှင် ရွတ်ရမည့် ဂါထာတော်
January 26, 2020 Latest Myanmar News 0
အချစ်ရေး အဆင်ပြေအောင် မိမိချစ်သူ ကောင်မလေးက. ပစ်ထားလို့ ပဲဖြစ် ဖြစ် မိမိ ချစ်သူ ကောင်လေးက. ပစ်ထားလို့ ဖြစ်ဖြစ် မ်ိမိ ကောင်လေး ပုံ ကောင်မလေး ပုံ ကြည့်ကာ မာဒဂ်ဂါထာ ၁၂ ပုဒ် တစ်ည. ၁၀၈ ခေါက် ကြည့် […]